सेट गुप्तिकरण, डिजिटल प्रमाणपत्र र डिजिटल 
बसालेका कम्प्युटर मा स्थापित केही सफ्टवेयर आवश्यक छ। खरीदार आफ्नो डिजिटल किनमेल टोकरी भरिएको र चयन गर्दा "क्रेडिट कार्ड संग भुक्तानी" विभिन्न संचार लाग्छ। प्रमाणपत्र फिर्ता र निस्कने, पठाइएका छन् एक दोहरी डिजिटल भुक्तानी आदेश सिर्जना हुन्छन् र बैंक नियन्त्रणमा बनेको छ दिइएको। कि सुपरमार्केट मा उत्पन्न भएको गुप्तिकरण कुञ्जीमा बाहिर लागि त त्यहाँ सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि तथाकथित मूल महत्वपूर्ण छ र सफ्टवेयर मा निर्माण गरिएको छ।
सेट परियोजना र इन्टरनेटमा क्रेडिट कार्ड संग सुरक्षित भुक्तानी गर्न एक वैश्विक मानक छ। यो इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य र बिल को भुक्तानी बारेमा मुख्य रूप हो। परियोजना मध्य 90 को दशक मा सुरु गरिएको थियो। को गरयो स्विडिश सुरक्षित विद्युतीय कारोबार छ सुरक्षित इलेक्ट्रनिक कारोबार लागि खडा छ। मानक सृष्टि पछि यस्तो भिषा, मास्टर कार्ड, आईबीएम, माइक्रोसफ्ट र नेटस्केप रूपमा ठूलो कम्पनीहरु थिए। यो स्वीडेन केही ठूलो बैंकहरू र पिन Giro देखि भाग एक पायलट परियोजना हुँदा।
सेट गुप्तिकरण, डिजिटल प्रमाणपत्र र डिजिटल हस्ताक्षर (नियमित कार्ड खरिद मा हस्ताक्षर अनुरूप) मा आधारित छ। प्राविधिक डाटा डिजिटल प्रमाणपत्र प्रयोग सहित र गुप्तिकरण गरिएको क्रेडिट कार्ड नम्बर पठाइएको छ द्वारा एक तथाकथित भर्चुअल ( "कृत्रिम") कार्ड सिर्जना गरियो। यो कार्ड प्रयोगकर्ता र कारोबार दुवै गर्न नियन्त्रण र मुद्दा प्रमाणपत्रहरू गर्ने बैंकहरू र दृढ VeriSign छ। VeriSign शो गर्न subcontractor छ। व्यापारी विभिन्न प्रमाणपत्रहरू भुक्तानी टिकट यसलाई भूत क्रेडिट कार्ड खरिदका लागि एक कटौती गर्दा प्रयोग तुलना गर्न सकिन्छ।
साइबर नगद मदत गरेको छ सेट विकास र पनि SIPS भनिन्छ यस्तै प्रणाली छ। सेट र CyberCash गुप्तिकरण को समान प्रकारको प्रयोग गर्दछ। Verifone सेट मानक प्रयोग गरेर अर्को छिमेकी कम्पनीहरु छ, र यो परीक्षण गर्दा थियो। सेट र समान प्रणाली संग, तपाईं मुद्रा व्यक्तिहरूलाई बीच, देशहरूमा जस्तै पैसा शोधन र रोक्न प्रयास रूपमा हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्न। धेरै अरू cashless संग रूपमा त सेट किनभने उच्च व्यवस्थापन लागत को सानो भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
कम्प्युटर र कम्प्युटर कम्पनीहरु - वित्त मेरुदण्ड को विद्युतीय संसारको
बैंकहरू बिस्तारै आफ्नो अपरेसन मा कम्प्युटर र दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न थाले रूपमा यो '50s थियो। पनि एक cashless प्रणालीमा त्यतिबेला केही विचार पहिचान लिङ्क हुनेछ कि संयुक्त राज्य अमेरिका भरि फैलियो छ। तिनीहरूले EFTS सम्भावित भविष्यमा प्रणाली (इलेक्ट्रनिक कोष स्थानान्तरण प्रणाली) भनिन्छ। तर यो कम्प्युटर सम्बन्धित विकासक्रम राम्ररी सुरु रूपमा '60s समयमा थियो। यो पहिले चरण मा कम्प्यूटरीकरण लागि बैंक मध्य प्रबन्धकहरू बलियो vurmade थियो। एक सिटीबैंक मा जन रीड (त्यहाँ बोर्ड को पछि अध्यक्ष) जो सम्पूर्ण शाखा स्वचालित भए गरेका थिए।
मध्य प्रबन्धकहरू बीचमा यो कम्प्यूटरीकरण उत्साह मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका मा थिएनन्। पनि स्पेन, COAS (संचालन र स्वचालन को आयोग) भनिन्छ कुरा तिनीहरूलाई काम गरे। विल्मिङ्गटन मा 1967 मा गरिएको थियो आईडी कार्ड एक प्रकारको लिङ्क धेरै पुराना संयुक्त राज्य अमेरिका मा तत्काल भुक्तानी परीक्षा को एक बैंक डेलावेयर को नेतृत्व। यो आईबीएम मूल magnetremsetekniken कुरा रूपमा वर्णन गरिएको छ आविष्कार थियो "बैंकिङ को दुनिया गर्न देखि आईटी संसार उपहार।"
बचत बैंकहरू को कम्प्यूटरीकरण लागि प्रमुख व्यक्तिगत Sven जी Svensson प्रारम्भिक अधिवक्ता को स्वीडेन बचत संवर्धन मा। रूपमा प्रारम्भिक को 50 औं शताब्दीमा Saltsjöbaden मा वार्षिक सम्मेलन कम्प्यूटरीकरण बैंकिंग सम्बन्धित आयोजित थियो। 90 को दशक इन्टरनेट व्यापार दुनिया प्रवेश गर्दा दशक थियो। कम्पनीहरु अक्सर अन्य गतिविधिहरु सुरु तर अन्ततः प्रमुख कम्प्युटर कम्पनी बन्न। यी त अक्सर विशाल कर्पोरेट दिग्गज मा मर्ज गरियो।
Burroughs बैंकिंग दुनिया मा जोर, यस्तो ठूलो कम्प्युटर कम्पनी थियो। स्विफ्ट सहित निर्माण Burroughs। यो बैंकहरू बीच संचार को लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय सिस्टम छ। एक अघिल्लो ठूलो स्वतन्त्र कम्पनीहरु स्पेरी थिए। Burroughs निर्देशक माइकल Blumenthal, Unisys गर्न Burroughs र स्पेरी मर्ज गर्न 1986 मा सफल भयो। Blumenthal पनि पहिल्यै वित्त मन्त्री भएको थियो।
यस सन्दर्भमा, Remington रेण्ड अर्को महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कम्पनीहरु। Unisys व्यापार शामिल छ, स्विफ्ट मा काम जारी राख्न र सैन्य गरेको तर्फबाट लागि आरएफआईडी-ट्याग कन्टेनर को एक विशाल सिस्टम को हेरचाह गर्न अंतर Alia। आरएफआईडी रेडियो छालहरू प्रयोग जानकारी सानो रकम पहुंचाता एक प्रविधि हो। हामी देख्नेछौं रूपमा, पुस्तकको बाँकी हो कि cashless समाजलाई आरएफआईडी धेरै जडानहरू को मामला मा। माइक्रोसफ्ट अपरेटिङ सिस्टम एटीएम प्रयोग गरिन्छ पहिले नै उल्लेख गरिएको छ। लिनक्स सञ्चालन प्रणाली पनि यी प्रयोग गरिएको छ, इन्टरनेट सर्भर र supercomputers गर्न ठूलो कम्प्युटर प्रणाली को बहुमत।
अर्को कम्पनी उदाहरण, धेरै बैंकहरू मा द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी अन्य कुराहरू syssIar बीच फिनल्याण्ड र स्वीडेन सक्रिय आईटी कम्पनी Tieto मा। फेसबुक गम्भीर भुक्तानी उद्योग मा परेका छन्। कम्पनी 2011 र कम्प्युटर खेल कम्पनीहरूले मा भर्चुअल (स्पष्ट वा कृत्रिम) मुद्रा शुरू
हंग तुरुन्तै मा। फेसबुक पनि 500 ​​मिलियन प्रयोगकर्ता योजना बनाएका क्रेडिट कार्ड द्वारा भुक्तानी गर्न chatappen दूत मार्फत सक्षम हुनेछ। तपाईं "कुरा पाठ।" च्याट सफ्टवेयर हालतमा प्रयोग यसलाई बिस्तारै तिनीहरूलाई बीच वाक्य (टेलिफोन कुरा हेर्नुहोस्), विपरीत ई-मेल र नियमित मेल पठाउँछ।
फेसबुक पनि यस्ता केही अवस्थामा एक प्रतियोगिता मा आरोप लाभ द्वारा क्रोनर हजारौं मानिसहरूलाई robbed जो मार्फत एक इका -like पक्ष सिर्जना रूपमा fraudsters, को लागि एक उपकरण छ। यो बैंक बक्से मा डाटा सङ्कलन गरेको हुन सक्छ। कम्पनी एप्पल कार्ड भएका ग्राहकहरु लागि क्रेडिट कार्ड डाटा को एक विशाल डेटाबेस खडा गरेको छ। कम्प्युटर कम्पनीहरु चाहनुहुन्छ किनभने यो intimately आफ्नो उत्पादनहरु जोडिएको छ एक cashless समाज आंशिक छ। अधिक cashless अधिक कम्प्युटर।
पाठक शायद किनकी भाषा को अंदाजा रूपमा, कुनै 20 वर्षीया यो पुस्तक लेखे गर्ने छ। एकदम केहि वर्ष को लागि एक तरिका वा अर्को मा कम्प्युटर संग काम गरेको छ। म कसरी पुरानो हुँ, म छैन, तथापि, किनभने गोपनीयता कारण उल्लेख। एक स्वभाविक आत्मपुरक iaktagelse। म कम्प्युटर उद्योग गरेको पक्ष बाट cashless समाज तिर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया मार्फत आउन चाहन्छु अघि एक जीवनकालमा र लगभग आधा यस पुस्तकको लेखन लिन थियो। तर यो लगभग 50 वर्ष पहिले भयो भन्ने कुरा बारे छ। आजको कम्प्युटर संसारमा सचेत लिएको र देखेको कसरी नकारात्मक को cashless समाज छ जस्तो छैन।
अपवाद को RAND निगम देखि पावलले Armer नामको मानिसको बारेमा हो, र पहिले नै cashless भुक्तानी वरिपरि लेट 60 उच्च-प्रोफाइल गोपनीयता मुद्दाहरू। उहाँले अमेरिकी सीनेट यो बताउनुभयो। आज हामी कम्प्युटर संसारमा थप त्यस्ता पुरुष र महिला आवश्यक हुनेछ। महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व बैंक मान्छे को छ। तर कम्प्युटर संसार बाट आलोचना कहाँ छ? Armer पनि रेकर्ड देखि नाम हटाउन केही हदसम्म व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न सक्ने गर्छ दावी।
आफ्नो काम मा Armer एक समयमा, कम्प्युटर उद्योग मा ज्याला मा डाटा आवश्यक। यो उहाँले पहिलो अज्ञात तरिका लाग्यो के मा डाटा स्टोर गर्न पंच कार्ड मा एक व्यापार गरे भनेर थिएन। डाटा तलब, शिक्षा र तीन क्षेत्रमा घोर भौगोलिक विभाजन को केवल शामिल थिए। पावलले Armer त्यसपछि क्रममा वस्तुहरू क्रमबद्ध, त्यो तुरुन्त (जो सुरुदेखि उद्देश्यले थिएन) सक्छ जसले उच्चतम वेतन थियो बारेमा जो थियो हेर्नुहोस्। यो बनाम सादर cashless भुक्तानी रूपमा घाटा भविष्य निष्ठा गोपनीयता को चर्चा गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता सुरु भएको थियो।
सायद kontantlöshet र कम्प्युटर बीच सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जडान पनि तथाकथित नेटवर्क पैसा को रूप मा कम्प्युटर सर्भर मा भण्डारण गरिएको छ प्रिपेड कार्ड भण्डारण छ बाहेक तिनीहरू, cashless तथाकथित ई-पैसा हो भन्ने छ। तपाईं कसरी असुरक्षित कम्प्युटर विचार भने, त्यसैले शायद यो सट्टा सुरक्षित गर्ने लोखर्के पिंजरे को परिसंचरण रोक्न हुनेछ।
मात्र कम्प्युटर मा एक निश्चित ब्याज गर्नेहरूलाई लागि, म एक कम्प्युटर किन्न छैन सुझाव दिन्छौं। बस किनभने यो कहिलेकाहीं गर्न राम्रो हुन सक्छ कम्प्युटरमा किन्न छैन। तपाईं बिना बाँच्न सक्छ। यो लगभग बस ग्यारेज खडा भएको एक कार किन्न छैन जस्तै सिद्धान्त हो। किनभने कम्प्युटर कम्पनीहरु हामीलाई kontantlöshet मा foist गर्न प्रयास र ठूलो भाइ तिनीहरूले इच्छा तिनीहरूले धेरै कम्प्युटर रूपमा बेच्न नहीं हुनेछ संग थप र थप जिद्दी। यो पनि एक कम्प्युटरको गर्न धेरै उपयोगी र रमाइलो कुरा हो। एक ठूलो कारण म अझै पनि कम्प्युटर मा पकड किन यी पुस्तकहरू लेख्न छ। कम्प्युटर पुस्तकालयहरु, टाइपराइटर र सफा खेलौना रूपमा उत्कृष्ट छ।
तर म इमानदार हुनेछु, कम्प्युटर मा मेरो चासो अलि प्रत्येक र म यो पुस्तक लेखिएको छ हरेक समय मृत्यु भयो। एउटा कुरा निश्चित छ। कुल cashless समाज हामीमाथि छ भने, सिफारिस गर्न मात्र एउटा कुरा त्यहाँ। कुल र सामान्य प्रविधि boycott। गर्न hushållsabetet तर Communicative र सूचनात्मक समारोह छ अरू सबै कुरा छ त्यो कुरा को प्रकारको छैन। यो साँच्चै प्रेम गर्ने प्रविधि एक लेखक एउटा इमानदार सल्लाह छ। सिद्धान्त, एक पर्याप्त ठूलो आंशिक प्रविधि boycott मार kontantlösheten। यो प्रविधि बिना अवस्थित गर्न सक्दैन। नगद (निर्माण सन्दर्भमा बाहेक) बिजुली र प्रविधि बिना व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले धेरै शताब्दीयौंदेखि त गरेका छन्।
म यसलाई होइन भनेर धेरै पटक म बस कम्प्युटर संग अन्त भन्ने विचार बारे fantasized कम्प्युटर प्रयोग गर्न जारी राख्न चाहनुहुन्छ हुनत। अचम्म लाग्छ के जीवन हुन र बिना कार्य हुनेछ। समुदायको निगरानी र नियन्त्रण नागरिकहरु थप र कम्प्युटर थप। त्यहाँ दुःख कुनै अन्त जस्तो देखिन्छ। त्यसैले जसरी पनि, तपाईं एक सानो थप बन्देज प्राप्त गर्न सक्छन्, र सधैं रूपमा आफ्नो कम्प्युटरमा के सोचिरहेका।
को cashless समाज पूर्णतया आफ्नो कुरुप अनुहार देखाउन हुनेछ जब, सायद म मेरो चासो को रूपमा कम्प्युटर छ स्थानमा एक पूर्ण गम्भीर योजना मा फुटबल खेलेका थिए इच्छा छौँ। शायद फलामको पाइप प्रारम्भिक घर कम्प्युटर र पीसी भङ्ग गरेको ठाउँमा संग्रामशील कार्यकता केही प्रकारको हुनुपर्छ। पढ्न भनेर placards संग mainframe कम्प्युटर केन्द्र बाहिर उभिए "मृत्यु कम्प्युटर गर्न!"। तर त्यसपछि अर्कोतर्फ, सायद यो पुस्तक छैन हुन आयो।
एक प्राविधिक reactionaries मलाई हेर्न गर्नेहरूलाई हुन सक्छ। त्यो सबै मामला छैन। के म सबैभन्दा संग गो मानिस जस्तै मड्डी cashless खाई छोड्न हुनेछ थियो। यो गर्न, एक पहिलो पछाडि केही कदम लिन अनिवार्य छ। देखि प्रविधि पूर्णतया फेरि सकारात्मक कुराहरू लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। अन्तमा, सजिलै हुनेछ cashless छैन समाज उचित आधुनिक फारम छ कम्प्युटर को आविष्कार बिना भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं।
हामी जो भुगतान को उपभोक्ताहरु छन्
कसरी 2008 मा Balsta मा वित्तीय क्षेत्र संघ कांग्रेस एक व्याख्यान मा उप राज्यपाल लार्स Nyberg शाब्दिक बताए।
"यो सजिलो पहिलो विचार मा त्यहाँ व्यापार र बैंकहरू जो भुक्तानी लागि दयालु भुक्तानी। छ तर सरल। व्यापारीहरूका आवश्यकता आफ्नो लागत ढाकिएको कि होइन गरेको छ भन्ने विश्वास गर्छन् गर्न, अन्यथा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैन छ। अनि बैंकहरू लागि नै जान्छ। त्यसैले, हामी किन्न माल र सेवाहरूमा चिन्ह गर्न अन्तमा सबै भुक्तानी लागत popping। दूध र तरकारी पसलमा र जम्मा दर एक बिट भन्दा अन्यथा मामला हुनेछ बैंक मा कम मा एक बिट अधिक महंगा हुन सक्छ। यो उपभोक्ताहरु र बैंक ग्राहकहरु छ त अन्ततः सबै भुक्तानी लागत तिर्न तर हामी तिनीहरूलाई देख्न छैन तसर्थ, हामी तिनीहरू हुन् भनेर विश्वास गर्न नेतृत्व गर्दै -।।। या अरू कि कसैले तिर्ने छ "
यो Riksbank भित्र एक व्यक्ति, एक पटक लागि, नाङ्गो सत्य, त्यसैले बताए। त्यहाँ जो भुगतान ग्राहकहरु र उपभोक्ताहरु छन्। हामीलाई अब धेरै नगद भुक्तानी व्यापार र बैंकहरू चार्ज कसरी nagging जोगिन गरौं। , प्रसंगवश, स्विडिश वर्ष प्रति शुद्ध मुनाफा औसत मा कमाउन सय धेरै डलर जो बैंकहरू। तथापि, तपाईं "गरिब व्यापार" यो बैंक मा आफ्नो दैनिक takings जम्मा गर्न सक्छन् जब बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। नेशनल बैंक मान्छे गलती थप "आर्थिक इष्टतम" दाबी रूपमा गर्न थप क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न चाहन्छ। Nyberg पनि चाहन्थे यो कुरा बुझेका तर सत्य बताएर पूर्ण टाढा गरे।
मध्य 90 मा एक व्याख्यान मा Stefan Ingves उप राज्यपाल गरेको बयान हुँदा उनले निम्नानुसार छ।
"बैंकहरू, साथै विभिन्न प्रकारका को आउटलेट, småvärdestransaktioner एकदम महँगो फलस्वरूप टिप्पणीहरू र सिक्का को ह्यान्डल गर्ने। लागि"
"अझ फराकिलो अर्थमा, यो मनमोहक थप लेनदेन जसबाट आजको महंगा कागज आधारित प्रशोधन थप गर्न सकिन्छ देखि इलेक्ट्रनिक सञ्चालन गर्दै छ।"
Ingves पहिलो बयान यसरी पूर्ण गलत छ। यो उपभोक्ताहरु र बैंक र व्यापार अन्ततः भुक्तानी लागत लिन्छ भन्ने छ। दोस्रो बयान Riksbank गरेको तथाकथित "तटस्थता" contradicts। कि यो भीड नियन्त्रण गर्ने नगद लागि जनसंख्या गरेको माग छ, छ। यो Riksbank खुला kontantlösheten अधिवक्ताओं।
यसलाई अझै रूपमा नै प्रयोग नगद वा क्रेडिट कार्ड कि निर्णय गर्न सक्ने साँचो छ। तर जब मान्छे निरन्तर यो मनोवैज्ञानिक अर्थमा छ रूपमा cashless विकल्प प्राथमिकता बैंकहरू, मिडिया, सरकार एजेन्सीहरू र अरूले brainwashed, निर्णय को एक ठूलो भाग हटाइयो। दुर्भाग्यवश, धेरै मानिसहरू nagging बच्न वा गलत लाभ पैदावार तपाईंलाई धोका गर्दा। हामी धेरै को लागि यो बरु प्रतिरोध गर्न प्रोत्साहन छ। क्रेडिट कार्ड को लागत बैंकहरू र क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरु को धेरै ठूलो संख्यामा राखिएको छ गोप्य। साथै, मात्र बैंकहरू र क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरु वास्तवमा kontantlösbrott मा के भइ रहेको छ मा एक आँखा छ।
नगद उद्योग हैंडलिंग को ठूलो भागहरु अक्सर कुनै ठोस तथ्याङ्कले व्यवस्थापन "अति महंगा" छ कि तर देखाउन "थाहा" अझै छ। विभिन्न संगठन र मान्छे "नगद ह्यान्डलिङ भारी ऐसे लागत।" भनेर कडुवाहट गुनासो बस वास्तविक भुक्तानी मामलामा जस्तै, यो हामी, अन्ततः पनि नगद व्यवस्थापन तिर्न गर्ने उपभोक्ताहरु छ। व्यापार मालिकले छैन पैसा आफ्नै वालेट बाहिर, उदाहरणका लागि, नगद ह्यान्डलिङ, Loomis तिर्न लाग्छ। सुरुमा, बैंकहरू व्यापार मा भुक्तानी लागि शुल्क को सबै भन्दा बनाउन तर अन्त मा दिन्छिन् गर्ने उपभोक्ता छ। अब हामी अन्ततः भुक्तानी र नगद व्यवस्थापन दुवै तिर्न जो स्थापित गरेको छ। यसलाई त्यसैले स्थापना whining रोक्न समय छ।
को भुक्तानी व्यापार पैसा खर्च हुनेछ मात्र लिखित धेरै अन्य सन्दर्भहरूमा। यो वास्तविक सामाजिक लागत, व्यापार लागत र व्यक्तिको खर्च बीच भेद छैन। यसलाई प्रचार के एहसान आधारमा तीन अलग अलग लागत को कुनै पनि कुरा गर्न मनपरी छ। सधैं लागू गर्नुपर्छ भनेर कुरा अन्ततः दिन्छिन् गर्ने छ। यस मामला उपभोक्ताहरु मा।